Iskuulkii ugu horeeyay oo wax lagu barayo caruurta qaba cudurka dhimirka oo Muqdisho laga furay. | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Iskuulkii ugu horeeyay oo wax lagu barayo caruurta qaba cudurka dhimirka oo...
Iskuulkii ugu horeeyay oo wax lagu barayo caruurta qaba cudurka dhimirka oo Muqdisho laga furay.
Mustaqbal oo ah xarun loogu talagalay in xannaano iyo waxbarasho bilaash ah ay ka helaan, carruurta la nool xannuunka dhimirka ee (Autism-ka) Muqdishana laga furay bishii January ayaa hadda waxbarta ku dhowaad 20 Arday oo da’doodu ay u dhaxeyso afarsano jir, illaa 12 jir, kuwaas oo gabdho iyo wiilal ah.
Dhaqtar Raxma Cabdullaaqir Maxamed oo baratay cilmiga carruurta baahiyaha gaarka ah qaba (psychology) ayaa aasaastay xaruntan, waxa ay sheegtay in fikirkan uu ku dhashay markii ay la kulantay hooyooyin badan oo haysta carruur qaba xannuunka dhimirka ee Autism-ka, kuwaas oo ka walaacsan mustaqbalka waxbarasho ee ubadkooda, maadaama soomaaliya aysan ka jirin xarumo wax lagu baro carruurta qaba Autism-ka.
“Waajib ayey igu tahay inaan ku caawiyo waxaan soo bartay ilmaheenna soomaaliyeed, maadaama aan ahay qof soo bartay cilmiga carruurta baahiyaha qaarka ah qaba.”
Xaruntan oo ah tii ugu horeysay oo laga hirgaliyo soomaaliya, burburkii kadib, waxa ay ardaydu ka helayaan waxbarashada aasaasiga ah, maadi iyo diini, cunto iyo barashada dad la dhaqanka iyo hadal barashada, maadaama ardayda la qaabilay ay ku jiraan kuwo aan hadli Karin, bulshana aan hore u dhex galin, Dhaqtar Raxma ayaa Radio Ergo u faahfaahisay, sida ay ku xushaan ardayda ay qaataan.
“Xaaladda waan qiimeynaa, inaan qaadan karno iyo in kale, waxaa jira carruur hadda aanan diyaar u ahayn inaan qabanno, sida, ilmo qallalaaya iyo ilmi is dilaaya.”
Xarunta oo ku jirta guri kiro ah ayaa ka kooban afar fasal, waxana barayaal ka ah 8 macallin oo dhammaan dumar ah, iyadoo halkii fasalba ay fariistaan 7 arday, ayna ka howlgalaan labo macallin, dhaqtar Raxm ayaan weydiinay waxa sababay in dhammaan macallimiintu ay dumar noqdaan.
“Dumraku iyagaa badanaa takhasuskan soo bartay, cilmi nafsiga carruurta, wayna ka beer jilcan yihiin ayaan isleeyahay ragga, maxaa yeelay hooyo baahida canuga ayay dareemi kartaa.”
Waxa ay sheegtay in xaruntu ay hadda awooddo iney wax barto ugu badnaan illaa 40 arday, balse mustaqbalka ay ballaarin doonaan.
Sihaam Cabdullqaadir oo baratay cilmiga bulshada,kana tirsan macallimiinta xaruntan ayaa sheegtay in carruurtu u baahan yihiin in macallinku waqti badan galiyo,una dulqaato, maadaama ay maskaxiyan xanuunsan yihiin, oo qaarkood aysan awoodin iney hadlaan oo baahidooda ay sheegtaan.
“Canug walba gooni waaye, tusaale arday hadduu xanaaqo wuu oynaa, ku hadduu xanaaqo gees ayuu iska istaagaa, koona wuu iska qoslaa, macallinka ayaa laga rabaa inuu fahmo canugan wuxuu u baahan yahay, waxa ay iyagu jecel yihiin ayaa lagu soo dhaweynaa, si waxbarashada kaaga aqbalaan.”
Hani Cali Garruun oo ah hooyo deggan Muqdisho ayaa xarunta geysay wiilkeeda oo 11 jir ah, lana nool xanuunka dhimirka ee Autism-ka, waxa sheegtay in hore ay u weyday goob waxbarasho oo ay geyso, taasina ay warwar weyn ku haysay.
Bishii January ayey barta bulshadu ku xiriirto ee Facebook, waxa ay ka heshay macluumaadka xaruntan oo bulshada ku wargalineysa in waalidiintu keensan karaan carruurta ka xanuunsan ee xannaano iyo waxbarasho u baahan. Radio Ergo ayey u sheegtay in sadex asbuuc oo wiilkeedu waxbaranayo ay ka dareentay isbedel.
“Kaligiis ayuu cunta cunaa, keligiis ayuu suuli galaa, qalinka waa qabsanaa, wax waa qoraa, faciis waa ka daba tagay, wax yaraa u dhiman oo dhinaca warka ah.”
Iskuulka ayaa furan maalmaha aan jimcaha aheyn, iyadoo ardayda guryahooda looga soo qaado gaari bas ah oo xaruntu leedahay, laguna geeyo.
Tirakoob rasmi ah lagama hayo, tirada carruurta soomaaliya joogta ee la noon Autism-ka, balse Dhaqtar Raxma Cabdullaaqir Maxamed ayaa aaminsan, in boqolaal kun ay gaarayaan.
Hay’adda qaramada midoobey u qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa sheegtay in xannuunka dhimirka ee Autism-ka, aan si cilmiyeysan loo ogeyn waxa sababa, balse yahay xannuun saameeya korrimada carruurta, iyadoo warbixin ay soo saartay 2019-kii ku sheegtay, in 160-kii carruur ah uu mid ka mid ah la nool yahay xaaladdan, dunida oo dhan, wiilashuna ay 4 illaa 5jeer kaga badan yihiin gabdhaha.
Previous articleFirst school opens in Mogadishu for Somali children with autism.
Next articleSomalia’s opposition cease recognising president as election row escalates.